Diyaarad rakaab lagu qaadi jiray oo dabdamis loo adeegsaday - BBC News Somali
Diyaarad rakaab lagu qaadi jiray oo dabdamis loo adeegsaday
Lahaanshaha sawirka NSW RURAL FIRE SERVICE
Diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo la casriyeeyay ayaa markii ugu horreysay taariikhda loo adeegsaday dabdamis, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalka Australia.
Diyaaraddan oo markii hore qaadi jirtay rakaab ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay loo adeegsaday daminta dab ka holcayay gobolka New South Wales ee dalka Australia.
Sida ay sheegeen mas'uuliyiinta, diyaaradda ayaa qaadi karta in kabadan 15,000 liitar oo ah biyaha dab damiska loo isticmaalo.
Mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in diyaaraddan sido kale looga faa'iideysan karayo in lagu daabulo ilaa 63 qof oo ah kuwa dabdamiska.
Diyaaradda ayaa biyo ku rushaysay dab halis ku hayay dekadda Stephens, oo 150km woqooyiga ka xigta magaalada Sydney, waxaana sida ay mas'uuliyiintu sheegeen haatan aad u yaraaday halista dabkaasi oo cagta mariyay dhul gaaraya 1,500 oo hektar.
Lahaanshaha sawirka TROY GRANT
Diyaaraddan ayaa waxaa dib u casriyeeyay shirkadda Coulson Aviation ee laga leeyahay dalka Canada, waxaana laga kireeyay shirkadda dabdamiska ee NSW Rural Fire Service ee dalka Australia.
Shirkaddaasi dabdamiska ayaa sidoo kale waxa ay leedahay sagaal diyaaradood oo kale oo dab damiska loogu tala galay, waxaana diyaaradahaasi ka mid ah mid qaadi karta 45,000 oo Liitar oo ah biyaha dabka lagu damiyo.
Balse afhayeen u hadlay shirkaddaasi oo lagu magacaabo Chris Garlick ayaa sheegay in diyaaraddani Boeing 737 ay tahay mid aad uga faa'iido badan diyaaradaha kale.
"Waxa ay awoodaa in biyo xooggan iyo waxyaabaha kale ee dabdamiska loo adeegsado ku rushayso dabka balse sidoo kale maadaama ay ahaan jirtay diyaarad qaadda rakaabka, marka waxaan ku qaadi karnaa dad badan oo aan ku geyn karayno gobollada."
Garlick waxa uu intaasi ku daray in uu aad ula dhacay sida shirkad ahaan ay diyaaraddani u anfacday.
Dabka ayaa burburiyay goobo qaar xilli ay jireen dabeylo xoogan.
Horraantii usbuucan ayaa dabeylo xoogan waxa ay ku dhufateen gobolkaasi oo muddo bilo ay ka jirtay abaar ah ba'an, waxaana sanad kastaa laga billaabo bisha Oktoobar ilaa Abriil keymaha gobolkaasi ka dhaca dab xooggan.